Edita - sparkling စတား - ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုလည်ဆွဲ
3 125 ပွတ်။
+! နေတဲ့ကြီးမြတ် Bat Mitzvah ဆုကြေးဇူးကိုမှန်ကန်စေသည်လှပကြည်လင် Swarovsky, ဒီလည်ဆွဲများ၏ဗဟိုဒြပ်စင်ပုတီး, crystals နှင့်ငွေအကပ်လျက်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပေါင်းစပ်တရားစွဲဖဲကြိုးအပေါ်ပုတီးချထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အကြွင်းမဲ့အာဏာမွေ့လျော် + အရှည် (ခန့်။ ) :. 15 1 /2+2extension ကို။
+ ဒီဇိုင်း Edita တစ်မူထူးခြားတဲ့, လက်, ကန့်သတ်ထုတ်ဝေလက်ဝတ်ရတနာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အမည်ဖြစ်တယ်။ + ဒီဇိုင်း Edita သင်သည်ဂန္ထဝင်နှင့်ခေတ်သစ်စတိုင်များအတွက်ထူးခြားတဲ့လက်ဖြစ်လက်ဝတ်ရတနာတတ်၏။ ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းထူးခြားဆန်းပြားနှင့်ကြော့ဖို့ရဲကနေအထိ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင်တန်ဆာသည့်အနုပညာရှင် Edith ကထပ်လောင်း-Epstein အားဖြင့် homemade ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နှင့်ရောင်စုံအလှဆင်ဖြစ်ပါသည် + ပုတီးချထားတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအရောင် Semi-အဖိုးတန်ကျောက်, ပုလဲ, Swarovski crystals, ဖန်နှင့်ကြွေပုတီးတစ် timeless နှင့်ဖန်တီးမှုပေါင်းစပ်နှင့်အတူအလှဆင်ခြင်းနှင့်ရွှေ, ငွေဖြစ်ပါတယ်။ လီမာ, ပီရူးတှငျမှေးဖှားသူမဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။ အလုပ်အကိုင်အားဖြင့်တစ်ဦးကရှေ့နေ, ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဣသရေလအမျိုး၌ပညတ်တရားကိုကျင့်သုံးပေမယ့်အမြဲ, ပနျးပုထုဆွဲခြင်းနှင့်ဖန်တီးရန်အချိန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်မိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းများကသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုရောင်းဖို့စတင်ခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီအမိန့်စီးဆင်းစတင်နှင့်အရှင်, ယခုနှစ်အစောပိုင်းနွေဦးရာသီ၌ 2001 Edita မွေးဖွားမှန်းချက်ရဲ့ - လက်ဖြစ်လက်ဝတ်ရတနာအမိန့်မှကမ္ဘာပေါ်မှာတရားဝင်အကျိုးတူ Edith ။ ယနေ့တွင် Edita လက်ဝတ်ရတနာကမ္ဘာတဝှမ်းမရွေးဖက်ရှင်ဆိုင်များရောင်းနေကြသည်။ + သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကိုဆက်ဆံဖို့ထူးခြားတဲ့လက်ဆောင်သီးသန့်ဒီဇိုင်းလိုင်းကို Edita '' လည်ဆွဲ, လက်ကောက်များနှင့်ပုတီးဧကန်အမှန်အလှည့်ဖြားခြင်းနှင့် enthrall လိမ့်မယ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ + ** တစ်ခုချင်းစီအပိုင်းအစ Edita ထုတ်ကုန်, သူ့ဟာသူအတွက်မေတ္တာနဲ့နှင့်ဂရုတစိုက် handcrafted ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်အချို့မူကွဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ ..
Edita - တော်ဝင်ရတနာ - Handcrafted အစ္စရေးပုတီး
4 689 ပွတ်။
Edita - စိမ်း၏ Twisted - Handcrafted အစ္စရေးလည်ဆွဲ
6 253 ပွတ်။
Edita - Shelly - Handcrafted အစ္စရေးပုတီး
3 855 ပွတ်။